Alerts – Page 3 – Women's Academy for Leadership and Political Excellence
The Women's Academy for Leadership and Political Excellence (WALPE) has said it is worried and concerned over the continuous victimisation and persecution of Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri and Netsai Marova by the State.
President of Zimbabwe sued over gender insensitive appointments
i) WALPE and ZWLA sue the President of Zimbabwe over gender insensitive appointments. Women’s Academy for Leadership and Political Excellence (WALPE) together with Zimbabwe Women Lawyers Association (ZWLA) represented by Zimbabwe Human Rights NGO Forum approached the High Court of Zimbabwe suing President Emmerson Mnangagwa for making cabinet appointments...
WALPE Research Launch statement
Patriarchy remains the biggest hindrance to young women and women with disabilities’ participation in leadership and decision making processes; Research Findings- Mutasa District Women’s Academy for Leadership and Political Excellence (WALPE) together with Deaf Zimbabwe Trust (DZT) and Mutasa Youth Forum (MYF) on 17 September 2020 launched their collaborative...
WALPE International Day of Peace Statement
Where Are the Government COVID19 social safety nets?…women query Government officials in Mutasa
At the meetings, community leaders met and dialogued with rights holders on pertinent developmental issues affecting the communities.
Urgent call for PEACE ahead of the 31st of July 2020
WALPE through the Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) has taken the Government of Zimbabwe to court challenging the imposed curfew of 6pm-6am.
How to become a WALPE member
Do you want to become a member of the Women's Academy for Leadership and Political Excellence and benefit from a myriad of training activities that we offer?
1st ever National Transformative Feminist Leadership Winter School for aspiring women leaders launched
Women’s Academy for Leadership and Political Excellence (WALPE) together with Women and Law in Southern Africa (WLSA) with support from the Netherlands Embassy held the first ever National Transformative Feminist Leadership Winter School for aspiring women leaders in Zimbabwe.
WALPE Statement on Constitution of Zimbabwe amendment No.2 bill public hearings
The Women’s Academy for Leadership and Political Excellence (WALPE) boldly repudiate the impetuous announcement of the Public Hearings dates (15-19 June 2020) on the proposed Constitutional Amendment Bill no.2 by the Parliament of Zimbabwe. The announcement came at a time when the country is under a COVID-19 induced lockdown...
WALPE in partnership with Deaf Zimbabwe Trust (DZT) and Mutasa Youth Forum (MYF) were on the 15th to the 19th of June 2020 in Mutasa District for capacity building and transformative feminist leadership development for aspiring women leaders under their new WEPD project.